Wabiga Shabeelle oo wada biyo dheeraad ah – Radio Muqdisho
Wabiga Shabeelle oo wada biyo dheeraad ah
Wabiga Shabeelle ee dhaxmara deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana 2 bilood oo aynu ka so gudubnay biyo yareeyay ayaa xiligan wabiga laga daremayaa in uu wado biyo aad ubadan marka loo eego sidii uu ahaa 2 di bilood ee aynu ka soo gudubnay.
Dadka ku dhaqan deegaannada uu maro wabiga Shabeelle ayaa soo dhaweeyay in wabiga uu keeno biyo ka badan biyihii uu waday 2 dii bilood ee aynu kasogudubnay.
Sidoo kale dadka beera qudaarta ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsanyihiin biyaha dheeraadka ah ee uu keenay webiga Shabeelle.
Biyaha hada uu wada wabiga shabeele ayaa larumeysan yahay in ay yihiin roobabki Guga oo ka curtay deegaanoo ka tirsan gobollada dalka Ethiopia.
Arday Soomaali ah oo ka qalin jabisay Jaamacad ku taal Gobol Suudaan ah oo Xaflad dhigtay ”SAWIRO”
Obama oo booqanaya dalka Britain